Himalaya Dainik » के मास्क धोएर पुन: लगाउन सकिन्छ ? (भिडियो)
के मास्क धोएर पुन: लगाउन सकिन्छ ? (भिडियो)
कोरोना भाइरसको प्रकोप नेपालमा बढ्दो अवस्थामा रहेको छ । सुरुका दिनमा तराई र सुदुरपश्चिममा बढी संक्रमण देखिएको थियो । तर अहिले काठमाडौँ उपत्यका संक्रमणको केन्द्र बन्दै गएको छ ।
अहिलेसम्म भ्याक्सिनको प्रयोग नभइसकेको अवस्थामा कोभिड-१९ बाट बच्ने एउटा मात्र उपाय आफु संक्रमणबाट टाढा रहनु नै हो । त्येसको एउटा मात्र उपाए सामाजिक घुलमिल कम गर्नु र मास्क, सेनिटाइजर लगायतको सहि प्रयोग गर्नु नै हो ।
यस्तोमा धेरैले मास्क त प्रयोग गरिनै रहेका छन् । कतिले सर्जिकल मास्क, कतिले एन-९५ मास्क त कतिले कपडाको मास्क लगाएको हामि देख्न सक्छौ । धेरैले सर्जिकल मास्क र एन-९५ मास्क पनि कपडाको मास्क जस्तै धोएर पुन: लगाएको देखिन्छ । त्यस्तै कतिले एउटा मास्क हप्ता दिन सम्म मैलो र छिद्र भइन्जेल लगाएको पाइन्छ । के यी दुवै तरिका सहि हो त ?
यीनेै प्रश्न र जिज्ञासाबारे सरुवारोग विशेषज्ञ डाक्टर अनूप सुवेदीले केही दिनअघि सांसद गगन थापासँगको फेसबुक संवादमा स्पष्ट जवाफ दिएका छन्। डाक्टर अनुपका अनुसार कपडाको जस्तो सर्जिकल मास्क र एन-९५ मास्क दुवै धोएर पुन: लगाउन मिल्दैन । मास्क धोएपछि त्यसको छिद्रहरूमा रहेको कपडा बिग्रन्छ। भाइरस सजिलै छिर्न सक्छ।
डाक्टर अनुपका अनुसार सर्जिकल मास्क र एन-९५ मास्क धोएर लगाउन नमिल्ने मात्र हैन आज लगाएको मास्क भोली त्यहि लगाउन समेत मिल्दैन । त्यसो भन्दै गर्दा कोरोना महामारीमा रहेका जनताले बिहान बेलुका हात मुख त जोड्न धौ धौ छ । कसरी दिन दिनै नया मास्क फेर्न सक्छन त ?
जापानमा चिन पछी छिट्टै संक्र मण देखिए पनि त्यहा बिना लकडाउन नै कोरोना सं क्रमण फैलिन सकेको छैन। त्यसको कारण जापानीहरुले मास्क नै हो
यसको पनि समाधान रहेको डाक्टर अनुप यसरी बताउछन – धुन नमिले पनि मास्क पुनः प्रयोग गर्ने तरिका छ। हामी स्वास्थ्यकर्मीहरू आज एउटा मास्क लगाउँछौं। त्यसलाई खोलेर कोठामा अलक्क कतै झुन्ड्याएर राख्छौं। भोलि फेरि अर्को लगाउँछौं। त्यसलाई पनि उसैगरी झुन्ड्याएर राख्छौं। यसरी चार दिनसम्म हामी चारवटा छुट्टाछुट्टै मास्क लगाउँछौं।
डाक्टर अनुप थप्छन – ‘मास्कको बाहिरी पत्र हातले छुन पनि हुँदैन। कसैगरी छोइहाल्यो भने हात साबुनपानीले धुनुपर्छ वा स्यानिटाइजर लगाइहाल्नुपर्छ।’
त्यस्तै यदि मास्क फाट्यो वा प्वाल पर्यो भने पनि त्यसलाई सिलाएर टालेर पुन: प्रयोग गर्न नमिल्ने डाक्टर अनुप स्पष्ट पार्छन । सहि तरिकाले मास्क लगाएर यो माहामारीबाट बाच्न सकिने डाक्टर अनुप स्पष्ट पार्छन । कुराकानीको सुरुवातमा उनले जापानको उदाहरण पनि दिएका छन । जापानमा चिन पछी छिट्टै संक्र मण देखिए पनि त्यहा बिना लकडाउन नै कोरोना सं क्रमण फैलिन सकेको छैन। त्यसको कारण जापानीहरुले मास्क लगाएर त्यसको रोकथाम गरेको हो भनेर डाक्टर अनुप स्पष्ट पार्छन ।
सांसद गगन थापाले डाक्टर अनुप सुबेदीसंग गरेको कुराकानी
बागलुङ-पर्वत जोड्ने पुल हेर्न सिक्री बेचेर सय किलोमिटरको यात्रा
अनौंठो सम्वन्धविच्छेद !
सुशान्तलाई लागू-औषध कसले खुवाउथे ? खुल्यो यस्तो रहस्य…
कुलमान घिसिङको नाममा खोलिएको त्यो ‘फेक अकाउन्ट’ जसले ल्यायो यस्तो…
चुम्बन गर्दै हुनुहुन्छ भने जान्नुहाेस् यी ५ कुरा
यी २० कुरा श्रीमानको अगाडि गर्न हुदैन
नेपालमा हुन लागेको कोरोना खोपको परीक्षणबारे थाहा पाउनुपर्ने तीन कुरा
हरिवंशदेखि करिश्मासम्मले लेखे: ‘कुलमान घिसिङ फेरि चाहिन्छ’
पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ हुने एयरपोर्टबाटै सिधै घर जान पाउने